အအေးလှိုင်းဖြတ်နေသော အိန္ဒိယ အနောက်မြောက်နှင့် အအေးလေစီးကြောင်းများကြောင့် အေးလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ – CharTake
အအေးလှိုင်းဖြတ်နေသော အိန္ဒိယ အနောက်မြောက်နှင့် အအေးလေစီးကြောင်းများကြောင့် အေးလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ
chartake | January 11, 2021 | Weather News | No Comments
အိန္ဒိယ မြောက်ဘက်မှာ အအေးပိုလာပြီး အစွန်ပိုင်းတွေမှာ ရေခဲမှတ်အောက်ထိ ရောက်ရှိနေပါပြီ ။ 22.1.2021 မှာလည်း တကြော့ပြန် လာနိုင်သေးတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ လေအေး စီးကြောင်းတွေ ဖြတ်ဆင်းလာနိုင်တယ် ။ က ချင် ပြည်နယ် နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ကယား ပြည်နယ်တွေမှာ အအေးပိုနိုင်တယ် ။ 12.1.2021 မှာ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် တနင်္သာရီ တိုင်းတွေမှာ အရှေ့ လေကြမ်းတွေ တိုက်လာနိုင်တယ် ။
11. 1 . 2021 မနက်ပိုင်းမှာ စတင် အေးလာနိုင်တယ် ။ 13 . 1 . 2021 ရောက်ရင်တော့ ညအပူချိန် ကျဆင်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး နေရာဒေသ လိုက်ပြီး အအေးပို လာတော့မှာပါ ရက် အနည်းငယ် ကြာနိုင်ပါတယ် ။ ထပ်မံ တင်ပြပေးပါမယ် ကျေးဇူးပါ။ Crd ; HtayAung
Unicode … အအေးလှိုငျးဖွတျနသေော အိန်ဒိယအနောကျမွောကျနှငျ့ အအေးလစေီးကွောငျးမြားကွောငျ့ အေးလာတော့မယျ့ မွနျမာနိုငျငံ
အိန်ဒိယ မွောကျဘကျမှာ အအေးပိုလာပွီး အစှနျပိုငျးတှမှော ရခေဲမှတျအောကျထိ ရောကျရှိနပေါပွီ ။ 22.1.2021 မှာလညျး တကွော့ပွနျ လာနိုငျသေးတယျ ။
မွနျမာနိုငျငံကတော့ လအေေး စီးကွောငျးတှေ ဖွတျဆငျးလာနိုငျတယျ ။ က ခငျြ ပွညျနယျ နဲ့ ရှမျးပွညျနယျ ကယား ပွညျနယျတှမှော အအေးပိုနိုငျတယျ ။ 12.1.2021 မှာ မွနျမာနိုငျငံ တောငျပိုငျး မှနျပွညျနယျ ကရငျပွညျနယျ တနင်ျသာရီ တိုငျးတှမှော အရှေ့ လကွေမျးတှေ တိုကျလာနိုငျတယျ ။
11. 1 . 2021 မနကျပိုငျးမ စတငျ အေးလာနိုငျတယျ ။ 13 . 1 . 2021 ရောကျရငျတော့ ညအပူခြိနျ ကဆြငျးပွီး တဈနိုငျငံလုံးနီးပါး နရောဒသေ လိုကျပွီး အအေးပို လာတော့မာပါ ရကျ အနညျးငယျ ကွာနိုငျပါတယျ ။ ထပျမံ တငျပွပေးပါမယျ ကြေးဇူးပါ။ Crd ; HtayAung
2020 ဒီဇင်ဘာ 29 မှ 2021 ဇန္နဝါရီ5အတွင်း မိုးလေဝသ အခြေအနေ
လာမယ့်အပတ်မှာ အအေးလှိုင်း လက္ခဏာများ စတင်လာပါတော့မယ်
မြန်မာနိုင်ငံကို ဉီးတည်မည့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိဟု အန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထား
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ရက်တွေမှာ အချိန်အခါမဟုတ် ဖျက်မိုးများရွာသွန်းလာနိုင်